Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka! | Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka!
musha Blog Electric bike knowledge Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka!
Zuva ： 2021-07-26 Zvikamu:Electric bike knowledge Views: 1,848 maonero
1, Kufamba zvakasununguka
Sezvakaita mabhasikoro, kugona kuenda kunzvimbo dzakasiyana kunogona kutariswa semukana mukuru wemabhasikoro emagetsi. Vanhu vanotasva, mabhasikoro emagetsi akasununguka kuuya nekuenda, anochinjika uye ari nyore.
Mabhasikoro emagetsi madiki, akareruka uye anogona kufambiswa nyore nyore mumigwagwa. Kunyanya mumaguta iwaya masendimita epasi pese ndarama, mabhasikoro emagetsi anogona kuiswa nyore nyore muchitsime chepasi kana munzvimbo yakasarudzika yenharaunda, pasina kutora yakawanda nzvimbo nenzvimbo yeruzhinji.
Mai Ma pakutanga vaityaira mota mazuva ese, asi parizvino, vatenga bhasikoro remagetsi idzva, risingori nyore chete kuenda nekudzoka kubasa, asi zvakare rine mari yakawanda yegesi yasara. VaWang vakatengawo bhasikoro remagetsi kumwana wavo uyo ari muchikoro chejunior sekondari. VaWang vakati, "Mwana ane rwendo rurefu rwekuenda kuchikoro, uye zvinomhanya uye zvakachipa kuchovha bhasikoro remagetsi."
Chokwadi, mabhasikoro emagetsi akafanana nemabhasikoro asina kubhadhara mari yemugwagwa, uye mota yakajairika yemagetsi haina kudhura. Panguva imwecheteyo, mutengo wemagetsi unongova chete chegumi chemutengo wemafuta emudhudhudhu. Vanhu havadi zvinhu zvinodhura uye zvakachipa?
panzira yemagetsi bhasikoro A6-R 16.5Kg
3, Energy okuponesa uye kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa
Bhasikoro remagetsi rine rimwe bhenefiti: rinogona kuwana zero zero uye harisvibise mhepo. Kune iwo chete 100 km rwendo, mota dzinowanzoda 5-15 litita epeturu uye midhudhudhu inoda 2-6 litita emafuta, asi mabhasikoro emagetsi anongoda 1-3 degrees emagetsi. Nedambudziko rekuwedzera kwesimba pasirese, bhasikoro remagetsi iri sarudzo ine musoro.
Munyika yanhasi iri kuwedzera kusvibiswa, tiri kubatsira pakudzivirirwa kwezvakatipoteredza nekushandisa mabhasikoro emagetsi kazhinji.
4, yakakunakira kuchaja
Bhasikoro remagetsi, kazhinji rinogona kumhanya makiromita makumi mana pazuva, uku uchiraja zvakare kuri nyore: mushure mekuishandisa masikati, tora bhasikoro remagetsi bhasikoro kuenda kumba usiku uye kuchaja. Yakanyanya nyore. Kana iyo bhasikoro remagetsi rikapera simba, iwe unogona zvakare kuvimba nesimba revanhu uye kuchovha uchidzoka. Izvi zviri nyore kwazvo kupfuura mota isina gasi.
5, akatasva kuchengeteka
Sezvo mabhasikoro emagetsi akareruka uye achinonoka (kumhanya kunogona kugadzikiswa zvizere uye kungogumira kune inonzwisisika renji), uye panguva imwechete nezvinodiwa nevatasvi, iko kuchengetedzwa kwekuita kwekutyaira mota yemagetsi kwagadziriswa, kunyanya mabhureki (double disc mabhureki) uye zvimwe zvinhu zvezviratidzo zvakagadziridzwa zvakanyanya kuzadzisa zvido zvekuchengetedza kwekufamba kwevanhu kwemazuva ese.
Bhasikoro remagetsi, mota yemagetsi inomhanya chaizvo haizove yakanyanya kukwirira. Saka kukwira kumusoro, zvakachengeteka. Kunyanya kune vanaamai vane vacheche, mukana uyu unonyanya kushanda uye wakachengeteka.
Tags:mabhasikoro zvemagetsi zvakwakanakira
Prev: Ndezvipi zviitiko zvebhasikoro muTokyo Olympic Games?
Next: Iyo yakatangira iyo yemagetsi gomo bhasikoro
Yongodaro 15.7KG mabhasikoro emugetsi ekutengesa A6-R